Ezuru ekwentị m. Kedu ihe m ga-eme? | Gam akporosis
Ignacio Lopez | 23/03/2021 20:00 | Emelitere ka 24/03/2021 09:42 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ọ bụrụ na ị nwere zuru ekwentị ahụ Ma n'ihi ujo ahụ, ị ​​maghị ihe ị ga - eme, n'isiokwu a anyị ga - eduzi gị site na nkwụsị iji zere ihe abụọ: na ekwentị gị bụ ihe azụmaahịa ma na ha nwere ike iwepụta ụdị ozi ọ bụla na gị ngwaọrụ.
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji ama ama anyị isi ngwaọrụ ịrụ ọrụ ndị a na-eme kwa ụbọchị dị ka ijikọ na akụ, ijigide ndị enyi na ezinụlọ site na oku ma ọ bụ izipu ozi, ịnweta email anyị, dị ka foto na igwefoto vidiyo ...
1 Ezuru ekwentị m: usoro ị ga - eso
1.1 Chọta ngwaọrụ anyị
1.1.1 Kpọọ ụda
1.1.2 Mkpọchi ngwaọrụ
1.1.3 Hichapụ ọdịnaya niile
1.2 Gbanwee okwuntughe
1.3 Kagbuo kaadi SIM
1.4 Gbochie IMEI site na ụgbọelu gị
1.5 Kpesa ihe ndị ohi mere n’aka ndị uwe ojii
2 Cheb'obi gị ma ọ bụrụ na ida ya
2.1 Tinye ihe mgbochi ngọngọ usoro
2.2 Were nkwado ndabere oge niile
2.3 Dee IMEI na ebe nchekwa
Ezuru ekwentị m: usoro ị ga - eso
Ihe mbụ anyị ga-ama mgbe ama anyị efuola n'anya anyị ọ bụ ma ọ bụrụ n’ezie ezuola anyị ya ma ọ bụ anyị ahapụ ya echefu ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị hapụrụ ya na ụlọ oriri na ọeterụ cafụ ma ọ bụ ụlọ ahịa echefuru ya, enwere olile anya na otu n'ime ndị ahịa ahụ ga-ebuga ya ndị enyemaka ụlọ ahịa.
Chọta ngwaọrụ anyị
Na ụzọ ala, oge ọ bụla anyị mere ka ekwentị ọhụrụ anyị rụọ ọrụ na data akaụntụ anyị, a na-arụ ọrụ usoro ọnọdụ na, na mgbakwunye na ime ka anyị mara ebe ekwentị anyị dị, Google na-ejikwa ya iji soro njegharị anyị wee si otú a nye anyị nsonaazụ ọchụchọ ka mma.
Iji chọọ ngwaọrụ anyị, anyị aghaghị ịga na weebụ Chọta ngwaọrụ Google m, tinye data nke akaụntụ Google anyị ma chere E gosipụtara ọnọdụ ngwaọrụ anyị na eserese ngosi. Ọ bụrụ na ị nwere njikọ ịntanetị n'oge ahụ, a ga-egosipụta ọnọdụ ya kpọmkwem.
Chọta ngwaọrụ Google m
Ọ bụrụ na ịnweghị njikọ ịntanetị, a ga-egosipụta ọnọdụ ikpeazụ na oge agafeela kemgbe ọ chọpụtara na ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọnụ ọnụ ahụ ka na-aga, anyị makwaara ebe ahụ, olile anya na anyị tufuru ya na ezughi ya.
Mana ọzọkwa, Chọta ngwaọrụ Google m, ọ na-enye anyị ohere:
Ọrụ a dị mma maka mgbe anyị echefuru ekwentị anyị n'ụlọ enyi ma ọ bụ n'ụlọ nke anyị ma enweghị ụzọ ịchọta ya n'ihi na anyị nwere echiche ọjọọ nke imechi ya. Site na ịpị a nhọrọ, na ngwaọrụ ga-amalite ime ụda na-adịghị akwụsị akwụsị nke ahụ ga-enyere anyị aka ịchọta ya.
Ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya nke igbochi ịnweta ekwentị anyị, site na nhọrọ a, anyị nwere ike kpochie ya ma gosiputa ozi na ihuenyo ngwaọrụ jiri akara ekwentị anyị ka ọ bụrụ na Ezigbo Onye Sameria hụ ya, ha nwere ike ịkpọtụrụ anyị.
Hichapụ ọdịnaya niile
Mgbe anyị gbalịrị nhọrọ niile ga - ekwe omume ma anyị enwebeghị ike ịgbake ekwentị anyị, anyị ga - eji nhọrọ a. Hichapụ nhọrọ, wepu ọdịnaya niile dị na ngwaọrụ ahụ, na ihe niile ozugbo ị jikọọ na ịntanetị.
Site na ihichapụ ọdịnaya niile echekwara na ngwaọrụ ahụ, anyị agaghị enwe ike ịchọta ya ọzọ, mana opekata mpe anyị ga-enwe nchedo na onye zuuru ya n'aka anyị, ị gaghị enwe ike ịnweta data nkeonwe anyị, onyonyo na vidiyo.
Ọ bụrụ na ịnweghị ọdụ gị ka ejiri paswọọdụ, ụkpụrụ, mkpịsị aka ma ọ bụ usoro nyocha ihu, onye ọ bụla nwere ohere ịnweta ọnụ gị ga-enwe ike ịnweta akaụntụ site na netwọkụ mmekọrịta gị, akaụntụ email, akaụntụ WhatsApp ...
Gbanwe okwuntughe nke ọrụ niile anyị na-eji mgbe niile bụ otu n’ime nzọụkwụ mbụ anyị ga-emerịrị mgbe ekwentị anyị lara. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere ndị enyi ndị ọzọ mere onwe ha na ekwentị gị, nwere ike ịnweta netwọkụ mmekọrịta gị wee jide ya, gbanwee email metụtara, paswọọdụ nnweta ...
Kagbuo kaadi SIM
Ọ bụ ezie na ọ na-adịwanye obere, n'ihi nchedo efu nke SMS nyere, anyị ka nwere ike ịchọta ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eji ozi ederede iji zipu nweta nkwenye koodu gị n'elu ikpo okwu.
Site na ịkagbu SIM, ị ga-egbochi ndị zuru ekwentị gị re-nweta usoro ntanetị gị na-anata akara nkwenye ahụ, usoro a maara dị ka nyocha abụọ nke ndị na-enye ọrụ ahụ ji n'aka na ị bụ onye nwe ya.
Gbochie IMEI site na ụgbọelu gị
IMEI (International Mobile Equipment Identify) bụ ihe nchọpụta pụrụ iche nke ekwentị ọ bụla, koodu nwere nọmba nke achọtara na abụọ igbe ọnụ gị dị ka na zụta akwụkwọ ọnụahịa. Ọ bụrụ na ezuru ekwentị mkpanaaka gị na ịnweghị igbe ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa ịzụta, ọ bụrụ na ị zụtara ekwentị site n'aka onye ọrụ gị, ha ga-edebanye aha ya.
Jiri ọnụọgụ ahụ wee kpọtụrụ onye na-ahụ maka ọrụ gị iji gbochie ya. Ozugbo akpọchiri nọmba ekwentị ahụ, ọnụ ya ị ga-atụfu njikọta niile ị na-enye, ị ga - enwe njikọ Wi-Fi naanị. Ọbụna ma ọ bụrụ na agbanwere SIM, ama ga-enwe oku, ozi na njikọta ịntanetị egbochi.
Otu esi achọta gam akporo gam akporo furu efu ma obu zuru ohi
Nke a bụ otu n’ime ụzọ ndị ọrụ ekwentị ji arụ ọrụ mgbe onye ahịa anaghị ezute oge ịkwụ ụgwọ. Nke a bụ nhọrọ ikpeazụ anyị ga-atụle, ebe ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume iwepụ ngọngọ site na IMEI, usoro ahụ site n'aka ndị ọrụ nwere ike iwe ogologo oge.
Kpesa ihe ndị ohi mere n’aka ndị uwe ojii
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ anaghị ahọrọ ịkọ akụkọ banyere ohi nke ọdụm ha, ebe ọ bụ na 99% nke ikpe, akụkọ ọ gaghị enyere ha aka inweta ya. Iji nwee ike ịkọ izu ohi, ihe mbụ dị mkpa bụ ịmata IMEI nke ọnụ.
Kọ akụkọ zuru ohi nke ekwentị gị nwere ike inyere ndị uwe ojii aka ịlele ma ọ bụrụ na mpaghara ụfọdụ nke obodo na-eme ụdị mpụ a iji lekwasị anya na mbọ ha ma nwee olile anya ijide ndị na-etinye aka na ya, naghachi ngwaọrụ gị.
Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike choo otu akwukwo mkpesa inwe ike igbochi IMEI nke ọnụ gị, yabụ na ọ naghị afụ ụfụ ịkọ ya, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme ya nke ọma site na ịntanetị gị nwere oge nke awa 72 iji kwado mkpesa ahụ n'onwe gị n'echeghị.
Cheb'obi gị ma ọ bụrụ na ida ya
Tinye ihe mgbochi ngọngọ usoro
N'akụkụ ụfọdụ nke edemede a ekwuru m banyere mkpa ọ dị igbochi ohere inweta ọdụ anyị Site na ụzọ dị iche iche ndị nrụpụta si etinye anyị. Agbanyeghị usoro nchekwa anyị ji, ha niile nwere ọrụ maka izobe ọdịnaya nke ọnụ anyị.
Site na izoputa ọdịnaya nke ekwentị anyị, nweta ozi anyị chekwara n'ime ọ ga-abụ ozi agaghị ekwe omume (fọrọ nke nta) ma ọ bụrụ na anyị amaghị Kpọghe usoro.
Ọ bụrụ na anyị ejighị usoro ọ bụla iji gbochie ịbanye na ọnụ anyị, ozi ahụ dị n'ime agaghi ezoro ezo, nke mere na onye ọ bụla nwere ike ịnweta na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla.
Nanị ụzọ isi mebie ọdịnaya nke ngwaọrụ ahụ, n'amaghị paswọọdụ, bụ Iweghachi data mmepụta ihe, usoro a jikọtara na ịhapụ ozi niile anyị chekwara na ya.
Were nkwado ndabere oge niile
Ebe ọ bụ na usoro nchekwa ahụ ghọrọ dijitalụ, amuru na odi nkpa ime akwukwo ndi ozo amuru. Makingme ndabere bụ usoro dị mfe, nke anaghị ewepụta oge ọ ga - echekwa anyị ọnụọgụ nsogbu, ma ọ bụ n'ihi na ezuru ekwentị anyị, n'ihi na ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, agbajikwa ihuenyo ahụ, anyị efuola…
Ozi anyị nwere mmasị na idebe ndị ọrụ niile bụ foto na vidiyo. Site na Google Photos anyị nwere ike ịnwe ndabere ndabere nke ihe onyonyo na vidiyo niile anyị ji ekwentị anyị ama oge niile.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ pere mpe na 15 GB, ọ bụ oghere na anyị nwere ike were ọtụtụ afọ jupụta na iji ngwaọrụ. Mgbe anyị hụrụ na anyị nwere ohere, iji gaa n'ihu na-erite uru nke arụmọrụ a, anyị ga-e copyomi ihe oyiyi kachasị ochie anyị chọrọ ịdebe na draịvụ mpụta na mpụga wee nwee ike ịhapụ ohere na igwe ojii Google.
Nhọrọ ọzọ, nke na-adịchaghị mma, bụ site n'oge ruo n'oge jikọọ anyị ama na kọmputa ime nkwado ndabere nke ihe oyiyi na vidiyo niile anyị were kemgbe oge ikpeazụ anyị mere nkwado ndabere. Ọ gwụla ma anyị nwere àgwà nke ịme ndabere kwa ụbọchị, ọ bụghị usoro kachasị mma ịgbaso ka nwere nkwado ndabere nke ekwentị anyị dum.
Dee IMEI na ebe nchekwa
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-amasị tufuo igbe nke ihe ọ bụla ị zụrụ, igbe ekwentị gị nwere ike ịbụ otu. Ọ bụrụ otú ahụ, ịmata nọmba IMEI ma ọ bụrụ na ezuru ekwentị gị bụ ozi na-agaghị ekwe omume, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị ide akwụkwọ ọnụahịa ahụ.
Iji zere nke a obere nsogbu, anyị dị nwere itinye koodu * # 06 # na ngwa nke anyị ama na- mara ihe nọmba IMEI bụ nke ngwaọrụ anyị. Ihe kachasị mma bụ ịchekwa nọmba ahụ dị ka kọntaktị na burukwa anyị, ọ bụrụhaala na anyị ejiri data mekọrịta ya na akaụntụ Gmail anyị.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịnweta nọmba IMEI anyị ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka anyị mee mkpesa n'aka ndị uwe ojii ma ọ bụ kpọtụrụ onye ọrụ ekwentị anyị ka anyị gaa n'ihu igbochi njirimara nke ekwentị anyị ka onye ọ bụla ghara iji ya ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ezuru ekwentị m. Gịnị ka m kwesịrị ịme?
Gịnị bụ VSCO, ngwa ntinye ederede foto na nnukwu obodo